အိမ်တောင် လူမိုက် ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ်မှန် – သုတရသ
အိမ်တောင် လူမိုက် ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ်မှန်
အိမ်တောင်လူမိုက် ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ် သည်စကားပုံလေး ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ဆိုလိုရင်းကို ဝေဝါးစွာပင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘူးစိုက်ရင် လူမိုက်လား…? လူလိမ္မာ မှ စိုက်ရမည်လား …? စသဖြင့် အမှတ်မထင် ဆရာကြီး(စစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်း)၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ၍ ဆိုလိုရင်း အမှန်ကို သိရတော့သည် ။
ဘူးပင်ကို အိမ်ဝင်းများအတွင်း မိုးအခါ စိုက်ပျိုးတတ်သည် ။ ဆောင်းအခါတော့ ကိုင်းဘူးပေါ့ ။ မိုးတွင်း လေတိုက်ခတ်ရာ အရပ်မှာ တောင်လေ၊ အနောက်တောင်လေများ တိုက်ခတ်ပါသည် ။ ဘူးပင်သည် နေ့အခါ နိုက်ထရိုဂျင်ကို ရှူသွင်းပြီး အောက်စီဂျင်ကို ထုတ်ပါသည် ။ ည အခါတွင်မတော့ အောက်စီဂျင်ကို ရှူသွင်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသတဲ့ ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် အဆိပ်ဓါတ်။
ထို့ကြောင့် အိမ်တောင်ဘက်တွင် ဘူးပင် စိုက်မိလျှင် ညအခါ ဘူးပင်မှလာသောလေသည် (လေဆိုး ) အဆိတ်ဓါတ်ပါပဲ ။ ကြာသောအခါ ကျန်းမာရေးထိခိုက် ရောဂါမျိုးစုံ ဝင်နိုင်ပါသတဲ့ ။ သည်အကြောင်းကြောင့်ပင် မိမိအိမ်တွင် ဘူးပင်စိုက်ပျိုးပါက အိမ်၏တောင်ဘက်အရပ်တွင် ဘူးပင် မစိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်းကို “အိမ်တောင်လူမိုက် ဘူးမစိုက်နှင့်” ဟူသော စာချိုးဖြင့် ရှေးပညာရှိများက ဆုံးမခဲ့ပါကြောင်း ။ ။
အိမျတောငျလူမိုကျ ဘူးမစိုကျနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ်ပါယျ သညျစကားပုံလေး ငယျစဉျကပငျ ကွားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သျော ဆိုလိုရငျးကို ဝဝေါးစှာပငျ အိမျထောငျကပြွီး ဘူးစိုကျရငျ လူမိုကျလား…? လူလိမ်မာ မှ စိုကျရမညျလား …? စသဖွငျ့ အမှတျမထငျ ဆရာကွီး(စဈကိုငျးဦးဖိုးသငျး)၏ ဆောငျးပါးကို ဖတျမိ၍ ဆိုလိုရငျး အမှနျကို သိရတော့သညျ ။
ဘူးပငျကို အိမျဝငျးမြားအတှငျး မိုးအခါ စိုကျပြိုးတတျသညျ ။ ဆောငျးအခါတော့ ကိုငျးဘူးပေါ့ ။ မိုးတှငျး လတေိုကျခတျရာ အရပျမှာ တောငျလေ၊ အနောကျတောငျလမြေား တိုကျခတျပါသညျ ။ ဘူးပငျသညျ နအေ့ခါ နိုကျထရိုဂငျြကို ရှူသှငျးပွီး အောကျစီဂငျြကို ထုတျပါသညျ ။ ည အခါတှငျမတော့ အောကျစီဂငျြကို ရှူသှငျးပွီး ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျကို ထုတျလှတျပါသတဲ့ ။ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျသညျ အဆိပျဓါတျ။
ထို့ကွောငျ့ အိမျတောငျဘကျတှငျ ဘူးပငျ စိုကျမိလြှငျ ညအခါ ဘူးပငျမှလာသောလသေညျ (လဆေိုး ) အဆိတျဓါတျပါပဲ ။ ကွာသောအခါ ကနျြးမာရေးထိခိုကျ ရောဂါမြိုးစုံ ဝငျနိုငျပါသတဲ့ ။ သညျအကွောငျးကွောငျ့ပငျ မိမိအိမျတှငျ ဘူးပငျစိုကျပြိုးပါက အိမျ၏တောငျဘကျအရပျတှငျ ဘူးပငျ မစိုကျပြိုးသငျ့ကွောငျးကို “အိမျတောငျလူမိုကျ ဘူးမစိုကျနှငျ့” ဟူသော စာခြိုးဖွငျ့ ရှေးပညာရှိမြားက ဆုံးမခဲ့ပါကွောငျး ။ ။
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေ ယာယီ ပိတ်